Wararka - Qiimeynta 500 Shirkadaha Shiinaha ee ugu sarreeya ee BBMG ee 2020 ayaa Gaaray Heer Sare
Laga soo bilaabo Sebtember 27th ilaa 28th, "2020 China Top 500 Enterprises Forum Summit" oo ay martigelisay Isbahaysiga Shiinaha iyo Ururka Ganacsatada Shiinaha ayaa lagu qabtay magaalada Zhengzhou. In kabadan 1,200 oo qof, oo ay kujiraan ganacsato badan, khubaro caan ah iyo aqoonyahano, iyo wakiilo warbaahin guud oo ka socda 500 ee ugu sareysa shirkadaha gudaha, ayaa kaqeybgalay kulanka waxayna kahadleen horumarka shirkada. Wang Zhongyu, Madaxweynaha Isutagga Shirkadaha Shiinaha iyo Ururka Ganacsatada Shiinaha, ayaa bixiyay warbixin muhiim ah oo ku saabsan mowduuca "Wajahaya Caqabadaha sida ku dadaalaysa abuurista Rajo cusub oo lagu horumarinayo shirkadaha waaweyn".
BBMG waxay kujirtaa kaalinta 180-aad 500-ka shirkadood ee Shiinaha ugu sareysa sanadka 2020 iyadoo waxqabad aad ufiican leh, ilaa 3-meelood sanadkii-sanadka; kaalinta 74aad ka galay 500 ee shirkadaha wax soo saarka Shiinaha ugu sarreeya sanadka 2020, ilaa 4 meelood sannad ka sannad; oo ka mid ahaa 100-ka shirkadood ee hogaaminaya warshadaha istiraatiijiga ah ee Shiinaha ee soo ifbaxay sanadka 2020 Kaalinta 57-aad, ilaa 7-meelood sanad-sanad, iyo dhamaan sedexda darajo oo la hagaajiyay marka la barbardhigo 2019. Marka la eego jawi qalafsan oo ba'an oo dibada ah, tartanka ganacsiga ugu weyn ee BBMG wuxuu leeyahay si weyn ayaa loo wanaajiyey, oo muujinaya guulaha dib-u-habeynta iyo hal-abuurnimada.
Mawduuca kulan madaxeedkani waa "Waxbarashada mashiinnada cusub: horumarinta shirkadaha waaweyn ee isbeddelka". Kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale diirada saareen "Madasha Horumarinta Waxsoosaarka tayada-sare leh", "Hal-abuurka mashiinnada cusub iyo furitaanka ciyaaro cusub, iyo dardar-gelinta horumarinta warshadaha macluumaadka elektiroonigga ah." Madasha "Afaraad Madasha Horumarinta Warshadaha Amniga" iyo "Dhismaha Xiriirka Shaqaalaha ee Is-waafajinta ee Shirkadaha iyada oo la raacayo Qaabka Horumarinta Cusub" iyo mowduucyo kale ayaa si buuxda la isku weydaarsaday, waxayna si wada jir ah uga wada hadleen fikirka istiraatiijiyadeed ee kobcinta fursadaha cusub iyo furitaanka ciyaaro cusub ee xaaladda is beddelaysa. . BBMG waxay fursaddan uga faa'iideysan doontaa inay sii wado dhiirrigelinta tayada sare ee kooxda, heerarka sare iyo horumar waara oo waara, waxayna ku dadaalaysaa inay xaalad cusub u abuurto horumarka tayada sare leh ee kooxda.
Xadka loogu talagalay shirkadaha 500 ee ugu sarreeya Shiinaha 2020 waa 35.96 bilyan oo yuan dakhliga hawlgalka. Shirkadaha liis garadka lihi waxay heleen dakhli dhan 86.02 trillion yuan, korodh dhan 6.92 trillion yuan sanadkii hore, iyo koror dhan 8.75%.